Ugu Dambeyn Daawo Fudud Raqiisna Ah Oo Loo Helay Bidaarta | Xaqiiqonews
Ugu Dambeyn Daawo Fudud Raqiisna Ah Oo Loo Helay Bidaarta
Khubarada ayaa sheegaya in ay soo ogaadeen hab raqiis ah oo loola dagaalamo bidaarta ragga. Sida laga soo xigtay iyaga, tani waxa ay noqon kartaa xalka dhabta ah ee ragga ay kaga takhalusi karaan Bidaarta.
Baarayaal ka socda macaahidda Cilmiga ah ee Jarmalka ayaa darsay suurtagalnimada in la xoojiyo xididka timaha ragga,taasi oo qeyb ka qaadan karta la dagaalanka Bidaarta.
Habka ay shaaciyeen waa mid fariid ah islamarkaana raqiis ah,khubarada ayaa ku adkeynaya in habkani uu yahay mid waxtar ah oo guuleystay.
Cilmi-baarayaashu waxay kaloo daraasad ku sameeyeen sifooyinka qaxwada, waxayna ogaadeen in ay aad u dhex gali karto jiridka timaha iyo hormoonka testosterone, kaasi oo keena timo lumiska sida ay qortay “Russian Today.”
Si loo hagaajiyo koritaanka timaha loona joojiya timo lumista(bidaarta), kafeyka ayaa loo isticmaali karaa in lagu shubo xididka timaha . Habkan ayaa la sheegay in uu hoos dhigay bidaarta 20%. dhanka kalase Cabitaanka qaxwada ma keenaayo natiijo taasi la mid ah , sababtoo ah waxaa loo baahanayaa in ka badan 50 koob oo qaxwo ah maalintii(taasi oo ah mid adag).